Vaovao - Ahoana ny fanarenana ny valin'ny motera?
Ahoana ny fanarenana ny valin'ny motera fiara?
Valizy maotera ao anaty motera Ny tontolon'ny asa dia henjana, fifandraisana mivantana amin'ny gazy, ny maripana avo indrindra amin'ny valizy fanalefahana dia mety hahatratra 800 ℃, ary amin'ny faran'ny tsingerin'ny fanosorana, ampiarahina amin'ny asan'ny valizy rehefa matetika ny hetsika fanokafana sy famaranana, ny faritra misy valizy dia tena mora ny mamorona fahavoazana. Noho izany, ny saina dia tokony hojerena amin'ireo faritra valva amin'ny fanitsiana, mba hahazoana antoka fa ao anatin'ny toe-javatra miasa mahazatra izy io.
1. Fanaraha-maso sy fanamboarana valva
(1) Zahao ny fihoaran'ny lohan'ny valizy sy ny fotony. Rehefa simba na tonta ny faran'ny valizy dia manaova fanitsiana, ary ny sanda fanitsiana dia tokony ho ny sandany farany ambany. Atsofohy ny tarehy valizy.
(2) Soloy ny valizy raha ny hatevin'ny valizy maotera maotera dia kely noho ny sandan'ny fetra. Rehefa manompo dia diniho ny faran'ny tsiranoka tsirairay ho an'ny fiviliana, ny fitafiana ary ny miondrika.
(3) Zahao ny faritra miasa sy ny vatan'ny valva tsirairay raha misy ny akanjo, may, na ny tsy fetezana, ary soloy raha ilaina izany.
(4) Ampiasao ny fetra amin'ny famaranana ny valin'ny valiny: 0.1mm ho an'ny valizy fidirana, 0.1mm ho an'ny valizy fanalefahana; ny lanjan'ny mahazatra ny hatevin'ny lohan'ny valizy: 1.0mn ho an'ny valizy fidirana, 1.5mm ho an'ny valizy fanalefahana; fetran'ny fampiasana: 0.7mm ho an'ny valizy fidirana, 1.0mm ho an'ny valizy fanalefahana.
(5) Mampiasà mikrometro sy V-frame handrefesana ny tsorokazo amin'ny valizy. Ny vatan-tsofina dia tohanan'ny zana-kazo V roa amin'ny halavirana 100 mm, ary avy eo ny refy dia refesina amin'ny 1/2 amin'ny halavan'ny valizy miaraka amin'ny mikrometra. Raha mihoatra ny fetra azo avela dia tokony ahitsy amin'ny press manual.
2. Fanesorana ny fivorian'ny valva
Aorian'ny fanangonana ny fiaran-dalamby, ny lohataona dia ao anaty toetram-panjakana, raha tsy voaangona tsy mety izy dia hipoitra ny lohataona ary handratra ny vatan'olombelona, ​​noho izany dia ilaina ny mampiasa disassembler lohataona valizy manokana hanatanterahana asa mahazatra rehefa manala ny lamasinina valizy, mba hiantohana ny fanesorana azo antoka ny fiaran-dalamby maotera faritra môtô. Ny mpihazona lohataona dia apetaka amin'ny lohataona mialoha ny fihenjanana amin'ny alàlan'ny fanesorana lohataona mba hahafahan'ny pin hidy malalaka ary afaka esorina mora foana. Ny mpihazona lohataona avy eo miala sasatra miadana miaraka amin'ny lohataona mandra-pahatongan'ny lohataona amin'ny toerana malalaka malalaka.
3. Fanoloana valizy valizy coil
Ny sehatry ny seza valizy dia mihena tsikelikely aorian'ny famerenany na fikolokoloana marobe, izay misy fiantraikany amin'ny fiaraha-miasa mahazatra eo amin'ny valizy sy ny seza. Raha ny haavon'ny fiasan'ny seza valizy dia 1.5mm eo ambanin'ny fipetrahan'ny valizy, dia tokony hosoloina ny vozon'akanjo valizy. mm, tokony hosoloina ny vozon'akanjon'ny valizy. Fomba fanoloana: ampiasao fitaovana manokana hisintonana ny vozon'akanjoko taloha, ary avy eo apetraho ny vozon'akanjo seza vaovao miaraka amin'ny 0. 0.75 ~ 0. 125 mm ny fanelingelenana ny lavaka fipetrahana ao anaty fitoeram-pitana azotaona mitete 15 ~ 20 s. Ny afters dia nanindry tao amin'ny fipetrahan'ny lohan'ny lohan'ny varingarina ka manafana ny hafanan'ny trano. Azonao atao koa ny manafana ny lohan'ny lohan'ny varingarina mankany 100 ° C miaraka amin'ny fanilo na fanilo entona (fanazaran-tena): alohan'ny hanafanana ny lohan'ny varingarina dia apetaho amin'ny vovoka tsaoka fotsy manodidina ny lavaka seza, ary apànao ho 100 ° C eo vovoka fotsy lasa mavo), avy eo totohondreo haingana ny peratra seza ary ampangatsiahio amin'ny rivotra.